फित्कौली हास्यव्यङ्ग्य सङ्ग्रह - गोप्य अर्थतन्त्र
गोप्य अर्थतन्त्र विमल निभा
नेपाली कांग्रेस पार्टीका तमाम डाक्टर एवं अडाक्टर रामशरण महतहरू गोप्य अर्थतन्त्रका सफल पृष्ठपोषक हुन् ।
नेपाली कांग्रेस पार्टीमा समाजवादको धेरथोर बहस हुनलागेकोमा मलाई कुनै आश्चर्य लागेको छैन । यो त अनिवार्यत हुनु नै थियो । हो, यसमा केही विलम्ब अवश्यमेव भएको छ ।
अब यसको कारण जेसुकै भए तापनि नेपाली कांग्रेसका सकल कांग्रेसीजन सच्चा समाजवादी भएकोमा दुईमत हुनसक्दैन । किनभने सत्ताको रमाइलो उचाइबाट हठात् प्रतिपक्षमा झरेपछि यिनीहरू स्वतस् समाजवादी हुने प्रक्रियामा जाने गर्छन् । अहिले यही भएको हुनुपर्छ ।
अहिलेसम्मन अपेक्षाकृत सबभन्दा ज्यास्ती सत्तासुखको भोगचलन गर्ने पार्टी नेपाली कांग्रेस भएकोमा कुनै शंका छैन । कतिपयलाई अलिकति शंका हुनसक्छ । एकाध मन्त्री हुनबाट बञ्चित कांग्रेसीबाट यस्तो शंका–उपशंका नभएको स्थिति पनि होइन । एकजना कुन्नि किन हालसम्मन मन्त्री हुन नसकेका एक वरिष्ठ कांग्रेसीलाई उनको वेदनासहित मैले भेटेको पनि छु ।
मेरो आँखाबाट दुई थोपा आँसु नै झर्यो । कठै ! अब यो नेपाली कांग्रेस पार्टीका कांग्रेसी भाइबन्धुहरूका परस्परको नितान्त आन्तरिक मामला भएकोले मैले धेरै केही भन्नु छैन । यति चाहिँ भन्नैपर्ने हुन्छ– यी कांग्रेसीहरू सत्ताको परम अवस्थामा सत्तावान हुने बखतचाहिँ समाजवादको ‘स’ पनि नभनेर खुला अर्थतन्त्र–खुला अर्थतन्त्रको निरन्तर जपना गरिरहन्छन् ।
अहिलेसम्मको शाश्वत कांग्रेसी आचरण यही होइन र ? यसको सशक्त उदाहरणका लागि नेपाली कांग्रेस पार्टीबाट कैयनबाजी अर्थमन्त्रीको लोभलाग्दो कुर्सीमा आसिन भइसकेका तिलचामले दाह्रीवाल कांग्रेसी डाक्टर रामशरण महतलाई लिनोस् । डाक्टरसाब खुला अर्थतन्त्रका जबर्जस्त पक्षपाती हुन् । यसलाई विश्वले नै एक कदम अघि बढेर मान्यता प्रदान गरिसकेको छ ।
अतः उनी विश्वकै एक उत्कृष्ट अर्थमन्त्रीको रूपमा शानदार ढंगले पुरस्कृत भइसकेका छन् । कुन्नि, यो कुनचाहिँं विश्व हो ज्ञ वास्तवमा यो विश्वमा एकमात्र विश्व रहेको छ भन्नेमा मेरो विश्वास छैन । आआफ्नो विश्वासको कुरो हो ।
अँ त, डाक्टर रामशरण महतकै लहरमा नेपाली कांग्रेस पार्टीबाटै एक–दुईपटक मन्त्री भएर अर्थ मन्त्रालयको दामी प्रांगणमा पाइला टेकिसकेका ‘सायद डाक्टर नै’ महेश आचार्य पनि आउँछन् । अब डाक्टर महेश आचार्य साँच्चिकै डाक्टर हुन् या होइनन्, वस्तुतस् मेरो सीमित किसिमको जानकारीमा छैन । डाक्टर महतकै लयमा बगेर डाक्टर महेश लेखेको हुँ ।
कदाचित् उनी डाक्टरहीन भएमा आफ्नो अज्ञानताका लागि क्षमाप्रार्थी हुँदै म के भन्न चाहन्छु भने नेपाली कांग्रेसका महेश आचार्य पनि कम्ता खुला अर्थतन्त्रका समर्थक होइनन् । हाल प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस पार्टी खाँट्टी समाजवादमा रहे तापनि उनी पार्टीगत प्रकृतिको विपरीत गएर खुला अर्थतन्त्रको खुलेर वकालत गर्न एक इन्ची पनि पछि परिरहेका छैनन् ।
तथापि डाक्टर रामशरण महत त डाक्टर रामशरण महत नै हुन् । परम सनातनी खुला अर्थतन्त्रवादी । यस्तो अरु को हुनसक्छ ?
जे होस्, यिनीहरू दुवैका केही दिनदेखि ‘समाजवादको मियादि ज्वरोले ग्रस्त’ कांग्रेसी बैठकहरूमा खुलेआम आलोचना प्रारम्भ भएको छ । खासमा आधा दर्जनचोटी अर्थमन्त्री हुने शौभाग्य पाएका डाक्टर रामशरण महतको ।
नेपाली कांग्रेस पार्टी सत्तासीन हुँदा प्राय चुपचाप अलौकिक आनन्दमा लीन रहने कांग्रेसी सगोत्री दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू यसरी मुखर भएकोमा डाक्टर रामशरण महत आश्चर्यचकित भएका छन् । सबैका तुणिरबाट निस्किएको निर्मम वाणको लक्ष्यविन्दु आफू भएकोमा डाक्टरसाब थोरै आहत पनि देखिन्छन् ।
उनी सँगसँगै एक किसिमले म पनि आहत नै छु । तर मेरो आहतीकरणको कारण विलकुलै पृथक प्रकारको रहेको छ । म किन आहत भएको छु भने सिंहदरबारभित्र र बाहिरको प्रतिपक्षी कांग्रेसी वृत्तमा डाक्टर रामशरण महतको धारावाहिक आलोचना अकार्य भइरहेको छ ।
मलाई के लाग्छ भने वास्तवमा डाक्टरसाब कुनै पनि खुला–सुला अर्थतन्त्रका असली हिमायती हुँदै होइनन् । यसमा डाक्टर महतको पनि मसँग भित्री हृदयले असहमति हुने कुनै कारण छैन । किनभने यो कथित खुला अर्थतन्त्रका निम्ति के र कति गोप्य काम–कारबाहीको अति गोप्यतापूर्वक निर्वाह गर्नुपर्छ, यो सत्यतथ्यबाट डाक्टरसाब अनजान छैनन् ।
अतएव नेपाली कांग्रेस पार्टीका तमाम डाक्टर एवं अडाक्टर रामशरण महतहरू खुला अर्थतन्त्रको नभएर गोप्य अर्थतन्त्रका सफल पृष्ठपोषक हुन् भन्ने व्यक्तिगत निष्कर्षमा म पुगेको छु । यसको साक्षात साक्षीका रूपमा नवधनाढ्य धन्नासेठ, नीला, पहेंँला, हरिया, राता, कालाबजारी र राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका तस्करहरू रहेका छन् ।
कान्तिपुर, जेष्ठ २२, २०७३